Barca Oo Warbixin Caafimaad Kasoo Saartay Dhaawacii Iniesta Soo Gaaray Kulankii Atletico %
Barcelona, ayaa waxay xaqiijisay in ciyaaryahankeeda Andres Iniesta, uu soo gaaray dhaawac dhanka Muruqa ah, intii ay socotay ciyaartii ay 1-0 uga badiyeen dhigooda Atletico Madrid, taasoo ka dhacday garoonkooda Camp Nou.
Goolka qura, kaasoo ay Barcelona, guusha ku heshay ayaa wuxuu ka yimid Lionel Messi, wuxuuna ahaa gool Laad xur ah, kaasoo uu shabaqa ku hubsaday ciyaaryahankaan gaaban daqiiqadii 24aad ee qeybta koowaad.
Marka laga soo tago farxada guusha, waxaa jira war kale, kaasoo aysan ku farxi doonin taageerayaasha Barca, kaasoo ah Iniesta dhaawac looga saaray kulankaan, isagoona lagu bedalay ciyaaryahan Andre Gomes.
Iniesta ayaa wuxuu soo gaaray dhaawacaan daqiiqadii 22aad ee qeybta koowaad, laakiin kooxdiisa ayaa ku dheelsiisay, waxaana la arkayay isagoo lugtiisa bidix gacanta saaraya, waxaana uu kasoo baxay xiligaas garoonka.
Iyadoo ay ciyaartu socoto ayaa lasoo daaweeyay, isagoona garoonka kusoo nqoday, mana uusan dhameysan ciyaarta oo dhan, isagoona lagu bedalay daqiiqadii 35aad ciyaaryahan reer Portugal, ee Gomez.
Sikastaba, warbixin ay soo saartay Barcelona, ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in Iniesta uu ka dhaawacmay lugta midig, gaara ahaan Muruqa ah sare, isagoona ubaahnaan doona baaritaano caafimaad oo dheeri ah.
Barca ma aysan shaacin mudada ama waqtiga uu Iniesta garoomada ka maqnaan doona, laakiin waxay daboolka ka qaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan xaaladiisa loo qiimeyn doono, baaritaana lagu sameyn doono.
Kulanka soo aadan waxay Barcelona ay la dheeleysaa dhigeeda Malaga, waana ciyaar ka tirsana La Liga, iyadoona uu ugu sii xigi doono ciyaarta aadka loo wada sugayo ee Chelsea, taasoo Champions League ka tirsan.
Sikastaba, dhaawaca Kabtan Andres Iniesta, ayaa wuxuu kusoo aadayaa Tobban maalmood ka hor ciyaarta Chelsea, waxaana macquul ah inuu gabi ahaanba seego kulankaas, inkastoo ay suuragal tahay inuu taam unoqdo.